Home News Dab Caawa ka kacay qeeybo ka mid ah suuqa weeyn ee Bakaaraha
Dab Caawa ka kacay qeeybo ka mid ah suuqa weeyn ee Bakaaraha
Wararka aan ka heleyno Suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaro ayaa sheegaya in dab uu qabsaday goor dhaw oo caawa ah.
Waxaa cirka qabsaday Qaac iyo olol laga arki karo meelo badan oo Muqdisho kamid ah waxaana sdioo kale la maqlayaa dhawaqa risaasta oo dhanka Bakaraha ka dhacayso, waxa ayna u badantahay in lagu kala eryayo dadka.
Dad ku dhaw suuqa Bakaaraha kana mid ah ganacsatada hantida kaga jirto suuqaasi aya inoo sheegay in qeybta Huudheyda iyo qeybta Maacuunta ay u badantahay in dabkaasi uu ka kacay, lamana ogaan karo xaalada rasmiga ah ee caawa ka taagan Bakaaraha.
Wararka qaar ee laga helayo Suuqa Bakaaraha ayaa sheegaya in Dabkaasi uu ka dhashay Koronto.
Ilaa iyo haatan lama oga khaasaraha rasmiga ah ee dabkaasi ka dhashay balse waxaa kusii socda Bakaaraha gaadiidka dab damiska.